သက်ကြီးရွယ်အိုဘဝကို ကျန်းမာစေဖို့ ဆေးစစ်စို့... - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
သက်ကြီးရွယ်အိုဘဝကို ကျန်းမာစေဖို့ ဆေးစစ်စို့…
ဇန်နဝါရီ 16, 2020 Tippapa Chutikankosol, M.D.
အမျိုးသမီးတွေမှာ ၆၅နှစ်နဲ့ အထက်၊ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် ၇၀ နှစ်နဲ့ အထက်တွေဟာ အရိုးရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုတွေ စတင်အားနည်းလာပြီဖြစ်လို့ အရိုးသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထိန်းသိမ်းကုသမှုတွေ နောက်ကလိုက်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် အရိုးကျိုးမှုများကနေ ကာကွယ်ပေး ထားနိုင်ပါတယ်။
သက်ကြီးပိုင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများမှာဆိုရင် ဗီတာမင် B12 နဲ့ ဖောလစ် စတာတွေ ချို့တဲ့မှုရှိမရှိ စတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေဟာဆိုရင် မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုစတာတွေ၊ သွေးအားနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်၊ အာရုံကြောစနစ်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးခွန်အားတွေရှိနေဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
ကြွက်သားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ ဟန်ချက်ညီမျှမှုတွေကို စစ်ဆေးပေးတာဟာလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတို့အတွက် အရေးပါ ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖို့ကလည်း များလာတတ်တာကိုး။ တစ်ခါလောက် ချော်လဲလိုက်တာနဲ့တင် တစ်ခုခု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် အသက်သေဆုံးတဲ့အထိတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) က အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ကို “သက်ကြီးရွယ်အို” လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအသက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင် တစ်ကိုယ်လုံးက ဆဲလ်တွေဟာ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် တစ်ဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်း လာပါတော့တယ်။ ဒီကနေ့ သက်ကြီးရွယ်အိုလို့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သူတွေဟာ တစ်ချိန်က ငယ်ရွယ်နုပျိုသူတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အိုမင်းလာကြပြီး ခံနိုင်ရည် အားလည်း ကျဆင်းလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင် သွေးစစ်တာတို့ တခြား အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးတာတို့နဲ့တင် မလုံလောက်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို စတင်ပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတော့မယ်ဆိုရင် အခြားသွေးတို့ဘာတို့မစစ်ခင် အထွေထွေ ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်မှုကို အရင်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ကဏ္ဍ ၄ ခု ခွဲထားပါတယ်။
၁. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု – စစ်ဆေးခံမယ့်သူရဲ့ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မျက်မြင်စစ်ဆေးမှု၊ အရင်က စစ်ခဲ့တဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေ စတာတွေကို စစ်ဆေးပြီး သူ့မှာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခု၊ ရောဂါတစ်ခုခုရှိမရှိ ကနဦးစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။
၂. မှတ်ဉာဏ်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု – မှတ်ဉာဏ်လျော့ပါးမှုရှိမရှိ အကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုအခြေအနေ စတာတွေကို စစ်ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှု – ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ နာတာရှည်တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့လည်း ရှိလာနိုင်တဲ့နည်းတူ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ကိုင်နိုင်မှုလည်း ကျဆင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်အဖို့ မိသားစုရဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သားသမီးတွေအပါအဝင် ကောင်းမွန်တဲ့ မိသားစုစောင့်ရှောက်မှု၊ မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု မှန်မှန်ရရှိနေမှု စတဲ့သူတွေဟာ ဘဝရဲ့ လက်ကျန်နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရာမှာ အထီးကျန်ဖြစ်နေသူတွေထက်ပိုပြီး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်ရှည်ရှည် နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း– အသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က နားတွေ၊ မျက်စိတွေ၊ အရိုးအဆစ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ မှတ်ဉာဏ် စတာတွေ အိုမင်းလာတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဖို့ တဖြည်းဖြည်း ခက်ခဲလာတာပါပဲ။ မျက်နှာသစ်တာ၊ ရေချိုးတာ၊ သွားတိုက်တာ၊ စားတာသောက်တာက အစ ပေါ့။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်အတွက် အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေကို တစ်ပါးသူအကူအညီမပါဘဲ ဘယ်လောက်လုပ်နိုင် သေးသလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တစ်ကိုယ်လုံး အသေးစိတ်မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း
သာမန်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးစစ်ဆေးမှုမျိုးကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကျန်းမာရေးကို သေချာလေးစစ်ဆေးပေးရတာမျိုးပါ။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်မှုတွေ၊ ဖောက်ပြန်မှုတွေ အတွက် သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း မေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ၊ အခုဆေးစစ်ဖို့ ဆေးရုံကို လာတဲ့အနေအထားနဲ့ ပြန်မယ့်အနေအထား စတာတွေအပေါ်မှာလည်း စစ်ဆေးကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူတွေအကြောင်းကိုလည်း မေးမြန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုအတွက် အဓိကကဏ္ဍ ၃ ရပ်ရှိပါတယ်။
၁။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ် – သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်မြင့်မားမှု၊ နှလုံးရောဂါ နဲ့ လေဖြတ်မှုတွေ အဖြစ်များတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို စစ်ဆေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ် – သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် မှတ်ဉာဏ်ဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်၊ မှတ်မိနိုင်မှုများကိုလည်း စစ်ဆေးရပါတယ်။
၃။ ကြွက်သားတစ်ဆောက်မှုစနစ်နဲ့ဟန်ချက်ညီမျှမှု – အသက်ကြီးသူများဟာ ကြွက်သားများ၊ အရိုးများနဲ့ အဆစ်တို့ အားနည်းလာခြင်းအပြင် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် ချော်လဲတတ်ကြပြီး အဲဒီကမှတစ်ဆင့် ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ သောက်နေရတဲ့ဆေးတွေကလည်း မူးတတ်တာကြောင့် လဲကျတာတွေဘာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေဟာ တစ်ခါ လဲပြီးရင် နောက်တစ်ခါ ထပ်လဲမှာကို ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာလို့ဆို လဲကျခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဒုက္ခတွေကို သိသွားကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ ကိုလက်စထရော နဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် တိုင်းတာဖို့ သွေးစစ်တာ၊ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကျန်းမာရေး၊ complete blood count စတာတွေကတော့ အသက်ကြီးသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အတွက် မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့ သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဗီတာမင် B12 နဲ့ ဖောလစ်ဓာတ်စစ်ဆေးခြင်း စတာတွေကိုလည်း လုပ်ရပါမယ်။​ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်း – မေ့လျော့ခြင်း၊ မမှတ်နိုင်တော့ခြင်း စတာတွေအတွက် Serum VDRL ဆိုတာကိုလည်း စစ်ဆေးရပါမယ်။
အရိုးပွခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စစ်ဆေးခြင်းတွေလည်း ပါဝင်ရပါမယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၆၅နှစ်နဲ့ အထက်၊ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် ၇၀ နှစ်နဲ့ အထက်တွေဟာ အရိုးရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုတွေ စတင်အားနည်းလာပြီဖြစ်လို့ အရိုးသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထိန်းသိမ်းကုသမှုတွေ နောက်ကလိုက်ထားပေးခြင်းအားဖြင့် အရိုးကျိုးမှုများကနေ ကာကွယ်ပေး ထားနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုဟာလည်း အခြားအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ နဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ(အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်သူတွေ) တို့အတွက် ဦးစားပေး စစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
တခြားစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ ECG တို့ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်တို့၊ နှလုံးခံနိုင်ရည်အတွက် ပြေးတဲ့စက်နဲ့စမ်းတာတို့ စတာတွေ ကိုတော့ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ တွေ့ရှိလာတဲ့ မူမမှန်မှုတွေကို သင့်တော်သလို ပြုပြင်ပေးရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ မိဘတွေအတွက် ဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် အထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စစ်ဆေးဖို့ သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘယ်test တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တစ်ဦးချင်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရေရှည်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေ ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်သလို အသက်ကြီးသူတွေ အတွက်လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူကြီးသူမတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အလုပ်တွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ သဘာဝအလျောက် အိုမင်းယိုယွင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ပါပဲ။
“အနာရောဂါနဲ့ နာဖျားမကျန်းမှုဆိုတာကတော့ ရှောင်လွှဲလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ အိုမင်းလာမှုကို နှေးကွေးအောင် ဆွဲထားပေးခြင်းအားဖြင့် ဇရာရဲ့ အထုအထောင်းကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာသက်ရှည်မှုအပေါ်မှာ ကျရောက်လာမယ့် သက်ရောက်မှုကို နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ကြိုးပမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။”
သက်ကြီးရွယ်အိုဘဝကို ကျန်းမာစေဖို့ ဆေးစစ်စို့... ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) က အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ကို “သက်ကြီးရွယ်အို” လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအသက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင် တစ်ကိုယ်လုံးက ဆဲလ်တွေဟာ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် တစ်ဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်း လာပါတော့တယ်။
User rating: 3.56 out of5with9ratings